- Tulsipur Online
Posted by Admin | २ माघ २०७४, मंगलवार २२:३६ |
प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी दाङमा हुन्छ र बनाउछौ भन्ने नेताहरुले अहिले ढुक्कका साथ त्यही कुरालाई दोहो-याउन सकेका छैनन् । कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोख्रेल र डिल्लीबहादुर चौधरी दाङका नेता हुन् । र माओबादी, एमाले र कांग्रेस पार्टीका अध्यक्षको महरा, पोख्रेल र चौधरी बिश्वास पात्र समेत मानिन्छन् । तर मंगलबार एकाएक दाङमा प्रदेशको राजधानी नहुने भन्ने हल्ला पछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । यस बिषयमा नेपाल सरकारका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सँग तुलसीपुर अनलाईनकर्मी निमुसंगम घर्तीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङमा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्कियो, बन्छ त राजधानी ?
उता (बुटवल) को प्रेसर धेरै भयो, प्रदेशको राजधानी यहाँ भन्ने अझै छैन । तर बुटवलको एकदमै प्रेसर भएको छ । यताबाट पनि हामीले दवावका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
तपाई सहित कृष्णबहादर महरा, शंकर पोख्रेल दाङको नेता पर्नुभयो के पहल गर्नुभयो त त्यसो भए ?
हामीले लाग्ने कुरा प्रधानमन्त्री सँग सबै कुरा गरिनै रहेका छौ । हाम्रो तर्फबाट कोशिस भएको छ तर अब दाङमा उठ्ने आन्दोलन प्रजातन्त्रको राम्रो पक्ष हो । अहिले कम्तीमा जनता उठे भन्ने त देखाउनु प¥यो नी । आफै पनि हामी आन्दोलित छौ र दाङमा भएन भने हामी आन्दोलित हुन्छौ भन्ने पार्ने हो ।
भोली बुधबार बिहान मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्दै छ । त्यो बैठकले के निर्णय गर्छ अस्थायी मुकाम दाङ या बुटवल ?
अहिले सम्म यही कुरा भन्ने गरि मन्त्री परिषदमा भएको छैन् । तर प्रेसर भने उता बुटवलका साथीहरु एक भएर लागेका छन् । उताका सबै नेताहरु कांग्रेस, एमाले, माओबादी सबै एक जुट भएर लागेका छन् । हामी पनि यता लाग्नु पर्छ भन्ने हो ।
दाङमा प्रदेसको राजधानी माग्दै भोली बुधबार देखी आमहडताल हुदै छ । यति बेला राजधानी सबैले माग्नु स्वभाविक पनि होला तर भोली दाङबासीले राजधानी पाउलान या गुमाउनु पर्ला ?
हामी आफ्नो तर्फबाट गर्ने आन्दोलन, दवाव सबै कुराहरु गर्नुपर्छ । यही आन्दोलन र दवावले दाङमा प्रदेशको राजधानी बन्नमा सहयोग पु¥याउछ ।
अस्ति सम्म मात्रै पनि तपाईहरुले प्रदेशको राजधानी दाङ नै बनाउछौ र हुन्छ भनेर भोट माग्नु भयो अनि जित्नु पनि भयो भोली राजधानी घोषणा हुन्छ भन्नु सक्नुहुन्छ तपाई ?
तपाईले सक्ने कि नसक्ने भन्ने भन्दा पनि हामी सबै लाग्नु पर्छ भन्ने भनाई हो मेरो ।
Previousदाङमा प्रदेश राजधानी माग्दै राजमार्गमा बसेर आन्दोलन
Nextआमहड्तालले बजार, शैक्षिक संस्था र राजमार्गपनि ठप्प
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा आज सम्बोधन गर्ने
क्वारेन्टाईनमै योगअभ्यास, उत्साहित भएर सिक्दै
घोराही ९ को गुरैयाँ टोललाई सिल गरियो
तुलसीपर ४ निवासी कोरोना संक्रमितको ‘डिस्चार्ज’
स्काभेटर आगजनी गरेको आरोपमा दुइजनालाई पक्राउ